ကျောင်းစာအုပ်ထဲမှာ မသင်ရတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ သက်ဆိုင်သော ဗဟုသုတများ - Shwe Khit Online TV
HomeKnowledgeကျောင်းစာအုပ်ထဲမှာ မသင်ရတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ သက်ဆိုင်သော ဗဟုသုတများ
ကျောင်းစာအုပ်ထဲမှာ မသင်ရတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ သက်ဆိုင်သော ဗဟုသုတများ
October 18, 2021 Yan Knowledge 0
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကျောင်းစာအုပ်ထဲမှာ မသင်ရတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ သက်ဆိုင်သော ဗဟုသုတတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူသားတွေ နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီး ပေါ်မှာ ဘယ်လို ထူးခြားတဲ့ အချက်တွေ ရှိမလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို အတူတူ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ အလယ်ဗဟိုဟာ နေရဲ့ အပူချိန်နဲ့ အတူတူပါပဲ ။
ပထမ ဦးဆုံး ပြောပြပေးမှာကတော့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ အလယ်ဗဟိုဟာ နေရဲ့ မျက်နှာပြင် အပူချိန် နဲ့ အတူတူပါပဲ ။ ဒီ အလယ်ဗဟို ရဲ့ မျက်နှာပြင် အပူချိန်ဟာ ဘယ်လောက်တောင် ပူလဲဆိုရင် အပူချိန်ပေါင်း ( 5800 K ) ရှိပါတယ်တဲ့ ။ Caltech ဘူမိဗေဒပညာရှင် Paul Asimow ရဲ့ Popular Mechanics သတင်းဌာနကို ပြောပြချက်အရ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ အလယ်ဗဟို ဟာ ထင်ထားတာထက်ကို အများကြီး ပူပြင်းပြီး ( ၁၀၀၀ ) ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် နီးပါးအထိ အပူချိန် ရှိပါတယ်တဲ့ …. shwekhitonlinetv.com
၂ ။ ရေညှိတွေဟာ နေရာ အနှံ့မှာ ရှိပါတယ် ။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ရဲ့ ပြောပြချက်အရ ရေညှိတွေဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ နေရာအနှံ့က သဲကန္တာရ မြေဆီလွှာ တွေမှာ ရှင်သန်ကြ ပါတယ်တဲ့ ။ နောက်ထပ် ထူးခြားချက် တစ်ခုကတော့ သူတို့ရဲ့ အရွက်က ထွက်တဲ့ အမွှေးလေးတွေဟာ လေထုထဲက ရေကို ဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ဘူမိဗေဒပညာရှင် Sasha Reed က ပြောပြထားပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ရေညှိလေးတွေ ဟာ ခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာ မှာတောင် ရှင်သန် နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကတော့ တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပါတယ်လို့ သူမ က ထပ်ပြောထားပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ ကမ္ဘာမြေဟာ လူသားမျိုးစိတ်ထက် အဆပေါင်း ( ၁၀၀၀၀ ) အသက်ကြီးပါတယ် ။
Princeton တက္ကသိုလ်က အကြီးတန်း သုတေသန ပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ Jeremiah P. Ostricker ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ သက်တမ်းဟာ ပျမ်းမျှအား ဖြင့် ( ၄.၅၄ ) ဘီလျံ သက်တမ်းရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ် ။ တစ်ဖက် မှာတော့ လူသားတွေရဲ့ ရှေးဦး မျိုးစိတ် ဖြစ်တဲ့ Homo Sapiens တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ( ၄၅၀၀၀၀ ) သိန်း ကျော် မှ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမြေကြီး နဲ့ သက်တမ်း နဲ့ ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဆပေါင်း ( ၁၀၀၀၀ ) လောက် ကွာနေတာကို တွေ့ရမှာပါ ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ “ကမ္ဘာမြေကြီး” လို့ နာမည်ပေးထားသူ ကို မသိရသေးပါဘူး ။
နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက်ကတော့ တစ်ခြား ဂြိုဟ်တွေနဲ့ ကွဲပြားစွာပဲ ကမ္ဘာမြေကြီး ရဲ့ နာမည်ကို ဘယ်သူက ပေးခဲ့လဲဆိုတဲ့ အချက်ကို သမိုင်းမှတ်တမ်း ဒေတာတွေမှာ ရှာလို့ မတွေ့ကြသေးပါဘူး ။ လက်ရှိအချိန်အထိ ပညာရှင်တွေ လေ့လာမိသလောက်အရ Earth ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းဟာ Old English နဲ့ High Germanic ကနေ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ အချက် ကတော့ ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ ဂရိ ( သို့ ) ရောမ နတ်ဘုရားတွေ ရဲ့ နာမည်ကို အစွဲပြုပြီး မမှည့်ထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဂြိုဟ် ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ …. shwekhitonlinetv.com
၅ ။ ကမ္ဘာမြေပေါ်က ဗိုင်းရပ်စ် အရေအတွက်ဟာ စကြာ၀ဠာထဲက ကြယ်တွေထက် များပါတယ် ။
လူသားတွေ နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီး ပေါ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ အများကြီး ပြည့်နှက်နေတယ်လို့ ပညာရှင် တစ်ချို့က ပြောပြထားပါတယ် ။ လေ့လာမှုတွေအရ ကမ္ဘာမြေကြီး ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် အရေအတွက်ဟာ ကုဋေ ၁၀ သန်း ( 10 Nonillion ) အထိ ရှိပါတယ်တဲ့ ။ ဒီ အရေ အတွက် ဟာ စကြာ၀ဠာထဲက ကြယ်တစ်လုံးကို အကြိမ် သန်း တစ်ရာ ကျော် သတ်မှတ်ဖို့ အထိ လုံလောက်တဲ့ အရေ အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ ပညာရှင် Katherine J. Wu က ပြောပြထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၆ ။ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး အိုဇုန်းလွှာအပေါက်
( ၁၉၈၅ ) ခုနှစ်တုန်းက သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ အန္တာတိက တိုက် ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး အိုဇုန်းလွှာ အပေါက်ကို ရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ ( ၁၉၈၇ ) ခုနှစ်မှာတော့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံ တွေဟာ ကနေဒါနိုင်ငံ မွန်ထရီအေား မြို့မှာ အစည်းအဝေး တစ်ရပ် ကျင်းပခဲ့ပြီး ပထမဦးဆုံး အစီအစဉ် အဖြစ် ကလိုရိုဖလူရိုကာဘွန် ကို ကန့်သတ်ဖို့ သဘော တူညီ ခဲ့ကြပါတယ် ။ နောက်ထပ် လေ့လာမှုတွေအရ အန္တာတိက တိုက်ပေါ်က အိုဇုန်း ပေါက်လွှာ ကြီးဟာ ( ၂၀၂၀ ) ခုနှစ် ဩဂုတ်လ တည်းက အလျင်အမြန် ကြီးထွားလာနေပြီး အကျယ်အဝန်း အရွယ်အစား ကတော့ ( ၂၄.၈ ) သန်း ကီလိုမီတာ ရှိတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပြောကြားထာပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ ကျောင်းစာအုပ်ထဲမှာ မသင်ရတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ သက်ဆိုင်သော ဗဟုသုတတွေထဲက တစ်ချို့ကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး ဗဟုသုတ ရစေမယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေ တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com